चिरा परेको घर [संस्मरण] – Chitwan Post
वैशाख १२, २०७२ को महाभूकम्पले घर चिरिएको खबर पाएँ । आफ्नो र ठूलाका परिवारको समेत आश्रयस्थल चिराचिरा भएछ । बस्न नहुने सायद नहोला, यहाँको काम सकेर गएपछि टालटुल गर्नुपर्ला भन्ने सोचेँ । तैपनि, मनमा अनेक कुरा खेलिरहेका छन् । जीवनमा धेरै घर बनाएँ, निजी तथा संस्थागत गरेर । अब सायद घर बनाउन नपर्ला भन्ने सोचले पनि धोका खायो । अब फेरि प्रत्यक्ष निगरानीमा घर निर्माण गर्न दुःख गर्नैपर्ने हुन आयो । त्यो दुःख गर्न पनि आवश्यक सामग्री जुटाउन कति दुःख गर्नुपर्ने हो, त्यसको त झन् लेखाजोखा छैन । २९ गते गएको थप ठूलो भूकम्पले झन् बढी चिरिएको जानकारी पाएँ । भरतपुर नगरपालिकाबाट प्राविधिक टोली आएछन् । घरमा बस्न नहुने राय दिएर गएछन् ।
घरका ठूलाका सबै बाहिर पालमा बसेका, पालैपालो ठूलो, मदन, रुपक, ठूली बुहारी, माइली बुहारीसँग फोनमा भएको वार्तालाप सुनेपछि पूरा विवरण सुन्न आतुर श्रीमती कहिले कुरा सकिन्छ भनेर प्रतीक्षारत छिन् । कान्छाका दुवै के–के भएछ भनेर चनाखो भएका छन् । फोन काटिएपछि बेलीविस्तार बताएँ, उनी त भलभल रून पो थालिन् । म पनि उनकै जस्तो गरी बाहिर भलभल आँसु झारेर नरोए पनि भित्र मनचाहिँ उनको भन्दा कम रोएको थिएन । ठूलो पाटीको बास भन्छ, नाति के गर्ने बाबा भन्छ, मदन कसो गर्ने हो भन्छ, सुरेश भित्र बस्नै नहुने भएछ बा भन्छ, श्रीमती फर्किएपछि डेरा कहाँ लिने भन्छिन् । म भने अक्क न बक्कमा छु ! मनचाहिँ भक्कानिएको भक्कानिएकै छ । बाहिर देखाउन भने सकेको छैन र देखाउन पनि भएन ।
हाल ठूलाका परिवार र हामी दुईको आश्रयस्थलमा भएको अनायासको क्षतिले निरन्तर रोइरहेकी श्रीमती र ठूलाका परिवारलाई मैले सहजै उपयुक्त जवाफ दिएर सान्त्वना दिन सक्ने उचित, भरपर्दो र विश्वासिलो कारण मेरा सामुन्ने थिएन । न तत्काल फर्किएर गएर केही गरिहाल्ने अवस्था नै थियो । थियो त केवल धैर्यता, साहस, ढाढस र आइपरेको विपत्तिजनक परिस्थितिसँग दृढतापूर्वक सामना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताको आश्वासन । त्यसैले, तत्काल हस्याङफस्याङ गरेर महँगी मारमा जानभन्दा परिस्थितिको निगरानी गर्दै आवश्यकताले निम्त्याएको बेला तत्काल गइहाल्ने गरी यहाँको कार्यसम्पन्नताको प्रतीक्षामा रहने निर्णय समझदारीमा गरेँ ।
घर बनाउँदाको श्रीमतीको श्रम र पसिना सम्झेर रोइन् उनी सायद । भावी आफ्नो आश्रयको चिन्ताले आकुलव्याकुल बनेकी मात्र हैनन्, ठूलो छोराको परिवारसमेतको आश्रयको अन्योलताले अनुहारमा देखिएको नैराश्य र रोदनप्रति मेरो कुनै जिज्ञासा रहन सकेन । म पनि छिनछिनमा उनको मुखाकृति देख्दा गला अवरूद्ध भएकाले टुलुटुलु हेर्नुबाहेक सम्झाउन सक्ने शब्दको उच्चारण गर्न सकिनँ । हामीलाई जस्तै छोराबुहारीलाई पनि भयो होला सायद ।
सानो टिन हालेको अस्थायी घर बनाउने विचार परिवर्तन हुँदै डी.पी.सी. मा छड तेस्र्याएर छत ढलान गरेरै बन्न पुग्यो । नगरपालिकाका इन्जिनियर मित्र भोजराज कौडाल, सिंचाइका अर्का मित्र रामप्रसाद अधिकारीको राय लिएर पछि माथिल्लो तला भिरालो ढलान गरेर बनाएको हुँ । माथिल्लो तलामा भने इन्जिनियर विराट घिमिरेको प्राविधिक सहयोग उल्लेखनीय रहेको थियो ।
आफ्नो कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण सामान्यबाट अल्लि माथिको स्तरको रुपमा पुगेको त्यस घर निर्माणमा धेरैको सहयोग जुटेको थियो । इँटा व्यवसायी हरिकृष्ण महर्जन, बलराम जोशी, नारायण घिमिरेको इँटा कारखानाबाट अनुकूलतामा भुक्तान गर्ने गरी इँटा लिएको थिएँ । मित्र शेखरकुमार श्रेष्ठबाट गिटी, बालुवा र ढुङ्गाको खर्च पछिसम्म तिर्दै जाने सर्तमा मागेको थिएँ । त्यसबखत वरिपरि पानीको पर्याप्तता थिएन । नारायणीबाट ड्रममा पानी गाडाबाट ल्याएर पट्याइदिन सहयोग पु¥याइदिने मित्र हरिश्चन्द्र तिमल्सेनालाई पनि लागेको खर्च बिस्तारै बुझाउँदै गएको थिएँ ।
छड, सिमेन्टका लागि क्याम्पसमा कारोबार गर्ने गरेको पसलमा गएँ । क्याम्पसमा आफ्नो सक्रियतामा बनेको हालको प्रशासकीय भवन तथा विज्ञानतर्फको तला थपको काममा सबै सामान लिएको ठाउँमा केही छूट गरी दिन अनुरोध गरेँ । मेरो अनुरोधलाई अत्यन्त न्यून किसिमले दिएको जवाफले मर्माहत त भएँ भएँ, अपमानित पनि भएको अनुभूत गरेँ । त्यसले मलाई व्यर्थै भनेछु भनेर दिक्क पनि बनायो ।
म त्यसबखत अल्लि झोक्किएर भैगो भनी बाहिरिन खोज्दा “त्यस्तो छूट चाहिए अब खरिद गर्ने सामानमा परिमाण बढाएर रकम निकाल्नोस्, त्यो तपाईंको हिसाबमा मिलाउँदा भैहाल्छ नि” भन्ने आसय प्राप्त भएपछि म झन् झर्किंदै “भैगो मलाई कुनै छूट चाहिँदैन, संस्थालाई घाटा पु¥याएर म आफ्नो लाभको अनुचित काम न मैले कहिल्यै गरेँ, न अब कुनै बेला नै गर्छु” भनेर झोक्किँदै फर्किएथेँ ।
जीवनमा अनेकौँ उतारचढावमा पनि मैले आफ्नो इमानको अगाडि कोही कसैसँग सम्झौता गरिनँ । त्यस्तो सम्झौता गर्ने अवसर धेरै पाएथेँ, तर गरिनँ । गरेको भए मेरो अवस्था अहिले घरको यो स्थिति हुँदा कसरी पार लगाउने भनेर चिन्तामा डुब्नु पर्दैनथ्यो । क्याम्पसको सामान्य जागिरे भए तापनि अञ्चलाधीश दुर्गाप्रसाद रिजालदेखि प्रजिअ चन्द्रिकानन्द खरेल, माधवप्रसाद उपाध्याय, विमलप्रसाद कोइराला, नवराज श्रेष्ठ हुँदै चितवनका सामाजिक कार्यकर्ता मुक्तिलाल चुके, टेकप्रसाद गुरूङ, भीमबहादुर श्रेष्ठ, जागृतप्रसाद भेटवाल, महेन्द्रलाल प्रधान, केशवराज पौडेल, मुक्तराज पन्त, पुण्यप्रताप राणालगायतका व्यक्तिसँग सन्निकट भएर काम गर्ने अवस्था मिलेको थियो । ठीक त्यसैबेला हिमालय माध्यमिक विद्यालय चम्पानगर र सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरको स्थापनामा पनि मेरो सक्रिय भूमिकाका कारण मलाई सामाजिक कार्यकर्ताको स्वाभिमानको गर्व भएको थियो ।
अर्को थप कुराले पनि ममा इमानदारिताको लहरा झाँगिँदै र फैलँदै जान सघाउ पु¥याएको म बेलाबेलामा सम्झन्छु । क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पसप्रमुख डा. सूर्यमणि अधिकारीले मेरा बारेमा मेरो गाउँमा बुझ्न लगाई उनकै सन्निकटमा रहेर निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न सघाउन प्रस्ताव गर्नुभयो । मैले पनि उहाँको राजनीतिक सक्रियताका एक जना साथीलाई छाडेर विपरीत आस्थाको व्यक्तिलाई चयन गरेर मप्रति जागेको विश्वासको सम्मानस्वरुप स्वीकृति जनाएथेँ ।
त्यसै बखत क्याम्पसको बृहत् हितका निमित्त मालपोत कार्यालयबाट गरिने रजिष्ट्रेसनको सयकडा पचास पैसा क्याम्पस विकास कोषमा राख्ने र त्यस कोषमा जम्मा भएको रकमबाट वीरेन्द्र क्याम्पसलगायत बालकुमारी, शहीदस्मृति र अनमी विस्तार क्याम्पससमेतले थोरबहुत रकम लगेर खर्च गर्ने गरेका थिए । त्यस कोषको सञ्चालन प्रत्यक्ष मेरो निगरानीमा हुन्थ्यो । त्यस कोषमा जम्मा हुने रकमका विषयमा चाहना राखेको भए उठेको केही प्रतिशत रकम आफ्नो गराउन सकिने मनसायको सल्लाह प्राप्त भएको पनि थियो । त्यस मनसायलाई उठ्न मात्र होइन, समाप्त नै गर्न मैले चालेको कदम अहिले सम्झँदा आर्थिकरुपले विपन्न भए पनि अन्य सामाजिक, साहित्यिक, मानवीय सेवाका हिसाबले त्यतिविधि निम्छरो त छैनझैँ ठानी सन्तुष्टिको सास हालसम्म सजिलै फेरिरहेकै छु ।
जीवनको उत्तराद्र्धमा आई सेवाबाट निवृत्त भइसकेको, छोराछोरीहरु आआफ्नै किसिमले गुजारा गरी बसिरहेकै बेला वर्तमानमा चर्किएको घरले कहिलेसम्म चर्काइरहने हो यसै भन्न सकिरहेको छैन । मेरो त घर चर्कियो, यद्यपि त्यो घर बस्न नहुने भएपछि चर्किएको भने पनि त्यो भत्किएकै सरह भयो । मेरा सन्तति चर्किएका छैनन् भनेर सारा चीज भत्किएकाहरुको अगाडि कोलाहल, चिच्याहट नगरे पनि निरन्तर रोइरहन पर्ने अवस्थाबाट अछूतोचाहिँ हुँदै होइन ।
कतिका छोरा चिरिएका छन् प्यारका टुक्रा, कतिका अर्धाङ्गिनी भत्किएका छन्, कतिका मुटुका धड्कन छोरी किचिएका छन्, कतिका बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, अन्य आफन्त गुमाएर आँखा रसाएका रसायै छन् । कैयौँ घरको दुरवस्था देखेर मन भक्कानो परेको प¥यै छ । कति बस्ने ठाउँ नपाएर रूँदै बिचल्लीमा परिरहेका छन् । कति घाइते छन्, कति उपचारपछि पालमा बसेका, कति अस्पतालको शøयामा ऐया ! ऐया ! भनेर चिच्याइरहेका छन् । कसैको खानेकुरा छैन, कसैको लाउने कुरा छैन । कसैका टुटेफुटेका केही छन् । सबैका सबै त्यही घरले थिचिएर अझैसम्म केही निकाल्न सकिएको छैन । कोही सानोतिनो फोहोर पन्छाउँदै छन्, कोही पन्छाउन सहायताको प्रतीक्षामा छन् ।
सबै थोक चिरिएकाको अगाडि सबै थोक नचिरिएको म ती सबै चिरिएकाका सामुन्ने जान मन हुँदाहुँदै टाढा भएकाले जान सकिनँ । म पनि त्यस्तै पीडित नै त हुँ आखिर भनेर सामान्य सहयोग पनि त सहयोग नै हो, शीत उभाएर घैला भरेजस्तै भन्ने लागिरह्यो । उहीँ भएको भए लायन्स क्लब चित्रवनबाट सहयोग गर्न जान्थेँ होला । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भरतपुर उपशाखाका टोलीसँग राहत बाँड्न गएको हुन्थेँ होला । साहित्यिक मनहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्थे होला । आफ्नै टोल सुधारका साथीसँगीहरुसँग होस्टेमा हैँसे भनेर खटिन्थेँ होला । भर्खरै खुलेको निवृत्त त्रि.वि. प्राध्यापक कर्मचारी समाजको त¤वावधानमा हुने राहत वितरणमा सक्रिय सहभागिता जनाउँथेँ होला । यसरी हिँड्न नपाउनु र नसक्नुको पीडालाई मत्थर गराउन यहाँको सोसाइटी र साना स्कुले नानीहरुसँग सहभागिता जनाई गौरवान्वित भएको छु । यो सहभागिताले तिनै त्रासले विक्षिप्त मनहरुसँग म साक्षात्कार भएको अनुभूत गरेर सन्तोष लिएको छु ।
(२०७२ जेठ १७ (मे २४, २०१५), अमेरिका)
भरतपुर ७ ले बाँड्यो ४८९ परिवारलाई राहत
चनौलीमा कीटनाशक औषधि छर्कियो
लकडाउन उल्लंघन गर्ने ९९ सवारीलाई कारबाही